Ka Saar Asalka Soomaaliya
Sidee looga Saaraa Asalka Sawirada?
Qaar badan oo suuqleyda internetka ah ayaa u adeegsada sawirrada websaydhka Fotor Background Eraser. Fotor backgrounds Faydiyuhu waa aalad bilaash ah oo looga saaro asalka sawirka isla markaaba. Tirtiraha asalka ah ee Fotor iyo soo celiyaha sawirka waxay ka dhigayaan asal hufan hufan biraawsarkaaga dhowr jeer oo keliya. Hadda waxaad si fudud uga saari kartaa asalka sawir kasta, xitaa marka aadan haysan waqti aad ku abuurto, adigoo gacan ka helaya qalabkan internetka.
Waxaad kuheli kartaa Fotor Asalka Eraser adoo si fudud uga baaraya internetka. Ka dib daalacashada, waxaad ka heli doontaa degel fara badan oo bixiya qalab kala duwan oo kaa caawin doona inaad ka saarto asalka sawirada. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad doorato mid kasta oo iyaga ka mid ah oo aad raacdo tallaabooyinka fudud ee la tilmaamay. Laakiin, waa inaad xusuusnaataa in qalabka oo dhami uusan bixin qaabab isku mid ah Qalabka qaar way fududahay in la isticmaalo, laakiin kuwa kale maahan.
Kadib markaad doorato qalabka aad doorbidayso, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah, ee loo baahan yahay. Talaabada koowaad, waxaad u baahan tahay inaad magac siiso feylka sawirka, halka aad rabto inaad ka bilowdo. Ujeedadaas awgeed, waxaad sidoo kale aadi kartaa 'My Computer' oo waxaad ka heli kartaa waddada feylka sawirka. Sidoo kale waa inaad u sheegtaa Fotor fure asalka meesha aad rabto asalka cusub ee hufan in lagu keydiyo. Adiga oo magac iyo waddo u siiya asalka cusub, waxaad awoodi doontaa inaad isla markiiba wax ku bilowdo.
Tallaabada xigta, xulo qaabka. Halkan, waxaad dooran kartaa 'dalag' ama 'gogol'. qaabka dalagga ayaa waxtar leh haddii aad rabto inaad sawirka asalka kalabar ka dhigto, halka qaabka 'hore' uu ka dhalan doono shaashadda buuxda ee shabakadda warbaahinta bulshada. Tallaabada xigta, waxaad u baahan tahay inaad gasho ballaca iyo dhererka sawirka soo baxay.
Hadda, waxaad gujin kartaa ikhtiyaarka 'Clipping Magic' dhinaca midig ee aaladda ama waxaad riixi kartaa badhanka 'New Clipping Magic Strokes' isla isla bogga. Hadda, waa inaad gashaa ballaca iyo dhererka sawirka asalka cusub ee goobahan. Haddii aad gasho baaxadda iyo dhererka saxda ah, qalabku wuxuu si otomaatig ah u dhejin doonaa asalka xudduudaha sawirka la xushay. Habkan waxaa loo yaqaan 'clipping magic'.
Ka dib markaad xoqdo, waxaad aadi kartaa 'Burushka' tab oo guji 'Strip Paintbrush' ee ku yaal menu. Ama, waxaad gujin kartaa 'Strip Paintbrush' ka dibna 'olor' liiska hoos u dhaca si aad u bedesho midabka asalka cusub. Ka dib markaad doorato midabka saxda ah, waxaad hadda bilaabi kartaa inaad tafatirto astaamaha asalka jira. Xaaladdan oo kale, waad beddeli kartaa cabirka iyo saxsanaanta ama waxaad ku hagaajin kartaa qaababka isku dhafka ah ee sawirka khadka tooska ah.
Farsamo kale oo faa'iido leh oo la adeegsanayo sawir-qaadaha asalka ah si looga saaro sawir asalka ah ee internetka waa in la isticmaalo 'Clone stamp' xulashada. Haddii aad rabto inaad beddesho midabka iyo cabbirka shaabad, waxaad ku samayn kartaa si fudud adoo kaashanaya xulashadan. Haddii aad dooratid ikhtiyaarka 'shaambada dalagga', waxaad si fudud u goosan kartaa qayb ka mid ah sawirka ama sawir dhan ka dibna ku dheji kartaa meel kasta oo aad rabto. Si aad u soo rarto sawirka, kaliya dhagsii 'Gelinta sawirka' bogga aad ku keydisay sawirka oo xulo 'Calaamadda Clone'.
Waa inaad ogaataa inay jiraan fursado badan oo la heli karo si looga faa'iidaysto barnaamijka tafatirka sawirrada sida Adobe Photoshop. Intaad isticmaaleysid Adobe Photoshop, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah aaladaha kala duwan ee la heli karo sida lakabyada, shaashadda, leydilaalka, wehliyaha, hagayaasha, siddo, marquee, gradient, splitter iyo kuwo kaloo badan. Qalabkani wuxuu waxtar weyn u yeelan doonaa ka takhalusidda asalka iyo wax ka beddelka sawirrada khadka tooska ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad wax ka beddesho sawirrada khadka tooska ah adigoon luminaynin sawirradaadii asalka ahaa, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho adeegyada bogagga sumcadda leh ee bixiya adeegyada tafatirka sawirrada. Qaar ka mid ah degelladan waxay bixiyaan adeegyo sida soo-dejinta bilaashka ah iyo tafatirka sawirrada, halka kuwa kale ay bixiyaan adeegyo tayo sare leh oo tafatirka sawirrada ah oo qiimo macquul ah leh.